Isu tese tinoziva kuti zviitiko zvakadai semichato nemapato hazvigone kuwira mune yako nguva yakakwana, especially if you are planning on traveling while pregnant. Pazvinogoneka, zvisinei, edza kuve nechokwadi chekuti kufamba kwako kunofambidzana nechikamu chakanyanya kunaka cheyako nhumbu. Iyo yekutanga trimester inowanzo achitambudzwa nenzeya, kushaiwa kwekuda kudya uye kazhinji unonzwa kutya, idzo dzakaipa nhau dzekufamba uchine nhumbu. Yechitatu trimester ndipo paunotanga kunzwa zvishoma kunge whale, uye kumira kwenguva ipi neipi yenguva kunoita kuti tsoka dzako dzipunzike. Wedzera yakazvimba makumbo, kushaya hope, uye kutenderera kwemucheche kuri kuramba uchifambira kupinda mune izvo uye unogona kunge uine rwendo husina mutsindo kana uchifamba uchine nhumbu. Iyo yechipiri trimester kazhinji ndiyo nguva yakanakisa yekufamba kwako. Iwe hausati wakakura zvakanyanya zvakadaro, uye kazhinji, kusvotwa kwanyura. Kufamba uchiri nepamuviri kunowanzoitwa zvakanaka kana ukasapedza nguva yese uchida kukanda mapfumo pasi, kana kurara pasi!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Mazano Ekufambisa Uchiri Pamuviri” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/tips-traveling-pregnant/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel nepamuviri Train Travel travelingwhilepregnant TravelPregnant traveltips
chitima kufamba, Chitima kufamba Britain, Chitima kufamba France, Chitima kufamba Germany, Chitima kufamba Italy, Chitima kufamba Switzerland, chitima kufamba Mazano, Chitima kufamba UK, Travel Europe
Chitima kufamba Sweden, Travel Europe